Salaamanews » Fiqi ” U jeedkayagu waa in la cirib tiraa kooxda Al-shabaab”
Home » Warar Fiqi ” U jeedkayagu waa in la cirib tiraa kooxda Al-shabaab” Print - Daabace: SalaamaNews - Jan 3rd, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Madaxweyne Xasan Sheekh oo si kulul uga hadlay suuq xumida SoomaaliyaPuntland oo furtay xarun dalxiis (Sawirro)Al-shabaab oo sheegtay inay dileen Xildhibaan Mustafe XaajiMaxkamad ku taal Puntland oo xukun dil ah dul-dhigtay rag ku xiran al-ShabaabMadaafiicdii ugu xooganeyd oo lagu garaacay gobolka Shabeellaha hoose
(Salaamanews)-Wafdigii uu hogaaminayay wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya, mudane C/xakiim Xaaji Maxamuud Fiqi, ee booqashada shaqo ku joogay gobolka Baay, gaar ahaan magaalada Baydhaba, ayaa Khamiista maanta ah dib ugu soo noqday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Wafdiga oo maalmo kooban joogay gobolka Baay ayaa halkaasi u tagay sidii ay u dhiirra galin lahaayeen ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Baay, waxaana wasiisrka iyo wafdiguusu ay booqdeen xarumaha ciidamada dowladda ay ku leeyihiin gobolkaasi Baay.
Wafdiga wasiirku wuxuu mushaaraadkoodii siiyay ciidamada dowladda oo dhawaan tababar loo soo xiray iyo kuwa kale oo horey ugu sugnaa gobolka oo dhawaan cabasho mushaar xumi ah u gudbiyay dowladda Soomaaliya.
Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed C/qaadir Shiikh Cali Diini, oo kamid ahaa wafdigii wasiirka la tagay gobolka Baay, ayaa wariyeyaasha garoonka Muqdisho ugu sheegay inuu guuleystay safarkoodii Baay.
“Waxaan tagnay xarumo ciidanku ay leeyihiin, saaka oo u dambeysay waxaanu howlgal ka sameynay deegaanka Goof-gaduud, ciidankuna waxay heleen mushaaradoodii ay xaqa u lahaayeen waxayna u noqon doontaa mid joogta ah” ayuu yiri Mr. Diini.
Wasiirka gaashaandhiga oo Muqdisho ku soo noqday kadib booqashadiisii gobolka Baay, ayaa horey u tagay magaalooyinka Kismaayo, Jowhar, Marko iyo Baladweyne, isagoo ku baaqay in la dar dar galiyo dagaallada ka dhanka ah kooxda Al-shabaab.
Tags: warar « Qoraalkii HoreMadaxweyne Xasan Sheekh oo Muqdisho markuu ku soo laabtay khudbad jeediyay	Qoraalka Xiga »Marwo Fowsiyo oo London kula kulantay xoghayaha arrimaha dibadda Britain	Halkan Hoose ku Jawaab